Shaybaarka Gemic. Dhagaxaanta dabiiciga ah ee khabiir ku takhasusay gemologists
BOOQASHADA GEMSTones & GANACSIGA
Bandhig joogto ah oo ka badan 250 nooc oo jawharad ka socda Kambodiya iyo adduunka oo dhan.
Machad cilmi-baaris oo gaar loo leeyahay oo madax-bannaan, oo bixiya baaritaanka gemolojiga iyo adeegyada cilmi-baarista.
HORDHACA GEM & GEMOLOGY
AQOONSIGA GEM - SIIBIYADDA & DAAWAYNTA - QIIMEYNTA & QALINJABINTA
Matxafka Gemstone & Ganacsiga
Iibso gemstones dhagahayaga
Machad gaar ah oo madax bannaan oo gemoloji ah, oo bixiya baaritaanka gemolojiga, adeegyada cilmi baarista iyo shahaadooyinka dhagaxyada.
Kamboodiya ayaa ah halka laga helo sapphires, ruby, zircon iyo dhagaxyo badan. Waxaan abaabulnaa safarro min 2 ilaa 10 maalmood ah oo ay ku jiraan safarka, hoy gelinta, booqashada miinooyinka iyo jarjarka miraha.
Nala soo xiriir si aad u hesho socdaal ku habboon
Sidee loo aqoonsan karaa dhagaxyada dabiiciga ah, isku-darka, daaweynta? Sidee loo qiyaasaa tayada iyo qiimaha? Waxaad heli doontaa jawaabaha dhammaan su'aalahaaga inta lagu jiro fasalkan.
NEW : Baahida weyn ee ardaydayada oo aan safri karin inta lagu gudajiro aafada, hada waxaa macquul ah in wax lagu barto khadka tooska ah.
Wararkeena ugu dambeeya, qoraalada ku saabsan dunida dhagxaanta. Safaradayada iyo dhacdooyinkayaga.
Sumurudka ugu weyn adduunka waa Inkalamu, Libaax sumurud laakiin The Bahia Emerald [...]
Hope Diamond waa dheeman buluug ah oo culeyskiisu yahay 45.52 carat. Dheeman buluuggii ugu weynaa ee abid la helo [...]
Mahadsanid Marwo Angelina Jolie
Thanks to Mrs. Angelina Jolie booqashadan lama filaanka ah ee dukaankeena maanta. Waxaan kaaga mahad celinayaa [...]
Safarka Mogok, Myanmar
Safarka Mogok ee Myanmar - Mogok hotel - Mogok Burma ruby ​​safarka Mogok, Myanmar Kadib [...]
Tababarka iibinta dahabka ah ee Sabara Angkor Resort & Spa
Tababarka iibka dahabka ee Sabara Angkor Resort & Spa Ms Iet ayaa lagu tababaraa soo dhoweynta iyo [...]
Wareysiga oo ka dhacaya Luc Yen Waxaa maanta la igu wareystay Luc Yen, oo udhaxeeya Vietnamese National [...]
Wareysiga uu qaaday TV-ga Faransiiska waxaa I wareystay kanaalka M6 ee ka baxa TV-ga Fransiiska ah ee “QALABKA KALIYA”, oo ku saabsan [...]
3 maalmood gaarsiinta adduunka
Shixnadaha Fedex Express waxay caadi ahaan qaataan 3 illaa 4 maalmood gudbinta khadka tooska ah ee raadraaca talaabo kasta oo wadada ah. Saxiix ayaa loo baahan yahay marka la keenayo.
4ta dhagax ee qaaliga ah
Xiddiga ruby ​​3.07 ct $61.00
Xiddiga ruby ​​3.97 ct $79.00
Xiddiga ruby ​​4.28 ct $86.00
Lamaanaha Ruby 6.93 ct $554.00
Safka Blue 1.62 ct $421.00
Safayr xiddig madoow 1.41 ct $32.00
Safayr xiddig madoow 1.52 ct $35.00
Safayr xiddig madoow 1.47 ct $34.00
Sumurud 0.90 CT $180.00
Sumurud 0.18 CT $36.00
Sumurud 0.31 CT $62.00
Sumurud 0.39 CT $78.00
Dheemanka 0.20 ct $130.00
Dheemanka 0.38 ct $247.00
Dheemanka 0.43 ct $280.00
Dheemanka Champagne 1.57 ct $6,406.00
Information Macluumaadka aan bartay wuxuu noqon doonaa mid qiimo leh mustaqbalka waxaanan rajeynayaa inaan qaato fasal kale oo ka mid ah Gobollada si aan wax badan uga barto. Haddii aad waligaa qorsheyneyso inaad iibsato dahabka meel kasta, waa inaad qaadataa fasalkan!
ubax / February 2020
… Dahabku runtii wuu fiican yahay shaqaaluhuna waxay ahaayeen kuwo saaxiibtinimo iyo xirfadba leh. Dukaanka waxaan uga tagay faraanti qurxoon oo qurxoon oo waligay i xasuusin doonta waqtigaygii aan ku qaatay Kambodiya :). Haddii aan halkan waqti dheeraad ah ku heli lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo aqoon isweydaarsiga si aan u sameeyo giraan aniga qudhaydu!
Absolutely Gabi ahaanba waa u qalantaa booqashada Machadka Cilmi-baarista, dhammaan xubnaha shaqaaluhuna waa xirfadlayaal, naxariis badan, dulqaad badan oo kuu sharxaya jawharad kasta oo xiise kuu leh Xaqiiqdii waan ku laaban doonaa Siem Reap oo waxaan ka iibsan doonaa jawharad halkan booqashadayda xigta. 5 xiddigood!
Jewelry Dahabku waa mid la awoodi karo oo qurux badan waana ku faraxsanahay waxyaabaha aan soo iibsanay. Guud ahaan waaya aragnimo weyn oo aan si weyn ugu talinayo… aad ayaan ugu faraxsanahay tayada adeegyada, taas oo aan had iyo jeer dammaanad laga helin Siem Reap.
Tayada iyo tilmaamaha dhagxaanta kala duwan ee aan dukaanka ka heli karno. Waxaan ugu dambeyntii helnay silsilad dhagaxa topaz cad oo qurux badan, hadiyadda ugu fiican ee saaxiibkey! Waad ku mahadsan tahay Machadka Cilmi-baarista
Sayline / 2019 karaa
… Waxaan helay booqasho aad uxiiso badan waxbadanna aan ka barto noocyada kala geddisan ee gemooyinka.
Kama aanan aqoonin dhagxaanta iyo dahabka kala duwan ee Kamboodiya. Waxyaabo fiican oo la sameeyo macbudka ka sokow.
Benji C / 2019 karaa
Waxaan go'aansanay inaan dib ugu noqono iyada oo aan iibsanay dhagaxa. Waa inaan idhaahdaa Daini dhab ahaan Gem dukaanka. La'aanteed, waxaa laga yaabaa inaan xitaa rabin inaan wax ka helno dukaankan. Gabagabo, dukaanku waa mid la isku halleyn karo waana dukaanka ugu fiican ee aan ka heli karo Siem Reap.
… Wuxuu si dhakhso leh ugu soo celiyey emaylkeyga waxaanan go aansanay naqshadeynta iyo qiimaha. Giraantu si dhakhso leh ayey u timid waxaanan la yaabay sida wanaagsan ee loo sameeyay uguna quruxda badnaa. Waxaan si buuxda ugu talin lahaa adeegan markalena waan sameyn doonaa.
Fasaxyada23 / August 2019
Hubso inaad booqato meeshan haddii aad raadineyso alaab dahab ah. Iyagu waa dukaanka kaliya ee la xaqiijiyay ee ku yaal Siem Reap. Shaqaaluhu aad bay ula qabsan karaan waxayna kaaga jawaabi doonaan dhammaan weydiimahaaga.
Waad i dhiiri galinaysaa